ZayYarHlaing: June 2010
God Mode ဆိုသည်မှာ Window7ရဲ့setting အားလုံးနဲ့Administrative Option တို့ ကို တစ်နေရာထဲမှာအသုံးပြုလို့ ရနိုင်တဲ့ folder တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
God Mode မှာ Action Center, Backup and Restore, Autorun, Desktop Godgets,
Devices and Printers, Power Options တို့ အပြင် setting တွေအားလုံးကို တစ်နေရာထဲစုပုံထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းတို့ ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။
God Mode ကိုအသုံးပြုလိုပါကအောက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပေးရပါ့မယ်။
Folder အသစ်တသ်ခုကို desktop ဒါမှမဟုတ် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာတွင်ထားပါ။
၄င်း folder ၏အမည်ကို ...
space မခြားပဲဆက်ရေးပါ။ ထိုအခါ God Mode icon အဖြစ်အလိုလိုပြောင်းသွားသည်ကိုတွေ့ ရပါမည်။
၄င်း icon ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ကာ တစ်နေရာထဲတွင် Windows7၏ setting များကိုနှစ်သက်သလိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်၏။
Computer နည်းပညာဆိုင်ရာ Tutorial များကိုအခမဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့ site တစ်ခုပါ။
Programming ဆိုင်ရာများ၊ Wed Design သင်ကြားမှုများ၊ Unix Tutorial များ၊ Flash Tutorial များ အစ၇ှိသဖြင့်ခေါင်းစဉ်ပေါင်း များစွာခွဲခြားပေးထားပါတယ်။
အမြဲတမ်းအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ကတော့ Register ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊
အလည်အပတ်အနေဖြင့်လဲ Tutorial များစွာကိုလေ့လာသင်ကြားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
i dont have the gun.
only i have Nikon.
...Mama take this badge from me
ကျွန်တော်တို မှာရှိတဲ့ camera တစ်လက်နဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကို
Posted in Video Clips by Zay Yar Haling |0comments
FIFA Fair Play award: Spain,
FIFA Fair Play award: England,
2010 World Cup ကြီးကတော့စပါပြီ။
သို့ ပေမဲ့လဲ ၄ နှစ်မှတစ်ကြိမ်ဆိုတော့လဲ၊ အပျက်ခံရအုန်းမည်။
Captain Rio FERDINAND လေ့ကျင့်ရင်းဒဏ်ရာရနေခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိ၏။
နောက်တန်းလူးများထဲတွင် Rio FERDINAND ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်၏။
ရှေ့ တန်းတိုက်စစ်မှုး Wayne ROONEY အားဒေါသမကြီးမိရန်ဆုတောင်းပေးနေပါ၏။
Squad List Of England.
Pinnacle@Duxton ဆိုတဲ့ HDB Building ကြီးရဲ့ အမိုးပေါ်မှာပါ။
အမှန်က အဲ့ဒီပေါ်ကိုတက်ပြီး sunset သွားဖမ်းတာပါ။
ထိုးထားတဲ့မီးရောင်ကြောင့် Light Painting Image လေးတွေလိုဖြစ်နေတာတွေ့ တာနဲ့ ရှုခဲ့တာပါ။
Choa Chu Kang Cemeter.
( 28.May.2010 )
Fast Image Resizer – Resize Pictures | Portable USB Pen Drive Applications
Portable EXIF Viewer | Portable USB Pen Drive Applications